SIYAASADA QARSIGA | LIGSERUVENI.COM - KALE
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah (Dibadda Midowga Yurub)
Siyaasadda cookie (ka baxsan Midowga Yurub)
Ogeysiiska Asturnaanta ee Deganayaasha Kaalifoorniya
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Isticmaalayaasha Midowga Yurub
Siyaasadda cookie ee Isticmaalayaasha Midowga Yurub
SIYAASADDA QARSOODIGA (KA baxsan EU)
Taariikhda Dhaqan galka ah: Meey 25, 2018
Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, kuwa ku xidhan iyo kuwa hoos yimaada (the 'Hundeshagen' , 'anaga' ama anaga ) wuxuu qiimeeyaa asturnaanta isticmaaleyaashayada iyo macaamiisheenna. Waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono mid hufan oo ku saabsan sida aan u ururino una isticmaalno macluumaadkaaga, si aan u ilaalino macluumaadkaaga aamin ah iyo inaan ku siino xulashooyin macno leh. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ( 'Siyaasad' ) wuxuu sharaxayaa dhaqamada gaarka ah ee www.ligseruveni.com bogga (the 'Goob' ), oo ay leedahay oo ay maamusho Hundeshagen. Nidaamkan waxaa loola jeedaa inuu kaa caawiyo inaad fahamto macluumaadka ay soo ururiso Hundeshagen, sababta aan u aruurineyno iyo waxa aan ku qabanno.
Nidaamkani wuxuu khuseeyaa ku-dhaqankayaga macluumaadka khadka tooska ah ee Barta iyadoo la tixgelinayo dhammaan adeegsadayaasha marka laga reebo adeegsadayaasha ka tirsan Midowga Yurub. Nidaamkani ma khuseeyo xogta shakhsi ahaaneed ee laga soo ururiyey websaydh ama barnaamijyo dhinac saddexaad ah, oo ay ku jiraan degello aad ka heli karto bogga. Websaydhyada iyo barnaamijyadu waxay lahaan karaan siyaasado u gaar ah, oo aan kugu dhiirrigelinno inaad aqriso ka hor inta aanad bixin macluumaad shakhsi ah iyaga ama iyaga loo soo marin. Waxyaabaha qaarkood ee la bixiyo ee ku yaal boggayaga, ayaa laga yaabaa inay leeyihiin ogeysiisyo dheeri ah oo ku saabsan ku dhaqanka iyo xulashada macluumaadka. Fadlan akhri shaacinnadaas dheeraadka ah ee qarsoodiga ah si aad u fahamto sida ay kuu khuseeyaan.
Fadlan si taxaddar leh u akhri Siyaasaddan si aad u fahamtid siyaasadahayaga iyo dhaqammadayada la xiriira macluumaadkaaga iyo sida aan ula dhaqmi doonno. Haddii aadan ku raacsaneyn siyaasadahayaga iyo dhaqankayaga, ha isticmaalin Bogga. Adoo adeegsanaya Bogga, waxaad ku raacsan tahay Siyaasaddan. Siyaasaddan way is beddeli kartaa waqti ka waqti. Isticmaalkaada joogtada ah ee Bogga ka dib markaan isbeddelada sameyno waxaa loo arkaa inay aqbalayaan isbeddeladaas, markaa fadlan ka hubi Siyaasadda xilli-xilliyeed wixii cusbooneysiin ah.
CARRUURTA DA'DA 13 KA
Boggan looguma talagalin carruurta da'doodu ka yar tahay 13 sano jir, annaguna si ogaan ah uma ururinno macluumaadka shakhsiyeed carruurta ka yar 13 jir. Haddii aan ogaano inaan ka ururinnay ama ka helnay macluumaad shakhsi ahaaneed ilmo ka yar 13 sano annaga oo aan hubin oggolaanshaha waalidka, waan tirtiri doonnaa macluumaadkaas. Haddii aad aaminsan tahay inaanu wax macluumaad ah ka heli karno ama ku saabsan ilmo ka yar 13 jir, fadlan nagala soo xiriir halkan privacy@ligseruveni.com .
MACLUUMAADKA AYAAN SOO QAADANAYNO IYO SIDEE AYAAN U SOO QAADNAYNAA
Waxaan ka soo ururin karnaa macluumaadka adiga kugu saabsan markaad is dhexgal iyo adeegsaneyso Barta. Macluumaadkan waxaa ka mid noqon kara macluumaadka shakhsiyeed (tusaale, magaca, cinwaanka iimaylka, cinwaanka boostada, lambarka taleefanka iyo wixii faahfaahin ah ee kale ee lala xiriirayo), macluumaadka farsamada (tusaale cinwaanka IP-ga, nooca biraawsarka, aqoonsi qalab) iyo macluumaadka isticmaalka (tusaale, bogagga aad booqato, xayeysiiska aad riixdo) on). Waxaan isku dari karnaa macluumaadka noocyadan ah si wada jir ah, oo si wada jir ah ugu gudbin karnaa dhammaan macluumaadka ku jira Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah sida 'Macluumaad' . Macluumaadka waxaa loo ururin karaa sida hoos lagu sharaxay iyo iyadoo la adeegsanayo cookies, beakons web, pixels, iyo farsamooyin kale oo la mid ah annaga ama shirkado kale anaga oo metelayna. Hoos waxaa ku qoran nooca Macluumaadka aan soo ururin karno:
Macluumaadka Aad Na Siiso.
markii aad iska diiwaangeliso ama aad isticmaasho Boggan, ama aad iska qorto adeeg kasta oo ka socda Bogga, waxaan ku weydiin karnaa inaad bixiso macluumaad shakhsi ah oo lagugu aqoonsan karo, sida magaca, cinwaanka boostada, cinwaanka e-maylka, lambarka taleefanka, ama faahfaahinta kale ee xiriirka.
markaad isticmaaleyso Bogga si aad ula xiriirto dadka kale ama aad u dirto, aad u soo dirto, u soo bandhigto ama aad u keydiso wax kasta oo ka mid ah faallooyinka, sawirrada, fiidiyowyada, emayllada, lifaaqyada, codadka la gelinayo, iyo waxyaabaha kale ee aad adigu ka soo saartay (si wada jir ah, 'Ku darsiga isticmaalaha') dadweynaha. aagagga Goobta. Ku darsigaaga Isticmaalaha ayaa loo gudbin karaa kuwa kale mana xakamayn karno ficilada dhinacyada saddexaad ee aad dooran karto inaad la wadaagto Ku-biirintaada Isticmaalaha. Sidoo kale kama hortegi karno adeegsi dheeraad ah ee Macluumaadkan markii la shaaciyo.
waxaa laga yaabaa inaan kaa codsano inaad na siiso Macluumaad markaad galeyso tartan ama xatooyo ballaadhan oo aan maal galineyno ama aan ka jawaabno sahanno aan soo dhajin karno oo aan weydiisan karno inaan ku dhammaystirno bogga.
markaad nala soo xiriirto si aad noogu soo wargeliso dhibaatada bogga, ama wixii kale ee weydiimo guud ah. Waxa laga yaabaa inaan xafidno diiwaanada iyo nuqulada waraaqahaaga (oo ay ku jiraan cinwaanada emaylka, lambarrada taleefannada, iyo wixii macluumaad shakhsi ah ee kale ee aad bixisay).
markaad isqorto wixii adeegyo ah ee lacag la bixiyo ama aad amarro dul dhigto Bogga, waxaa laga yaabaa inaan xafidno faahfaahinta macaamillada aad ka fuliso goobta iyo fulinta wixii amarro ah (xusuusnow in lagaa doonayo inaad bixiso macluumaad maaliyadeed ka hor intaadan dalban amar iyada oo loo marayo Bogga).
markaad si kale u isticmaasho Bogga, sida weydiimaha raadinta, taariikhda daawashada, aragtida bogga, u fiirsashada waxyaabaha aan ka dhigno mid la heli karo, ama rakibidda mid ka mid ah fiilooyinkayaga.
Farsamo, adeegsi, iyo Macluumaad gorfeyn ah.
Waxaan soo aruurin karnaa macluumaad farsamo iyo adeegsi gaar ah markaad isticmaaleyso Boggeena, sida nooca aaladda, biraawsarka, iyo nidaamka aad ku isticmaaleyso, aqoonsi qalab gaar ah, cinwaanka IP-ga, aaladda iyo dejimaha biraawsarka, bogagga aad booqatay, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan sida aad ula macaamilayso Boggeena iyo kuwa la-hawlgalayaashayada dhinac saddexaad ah iyo macluumaadka noo oggolaanaya inaan aqoonsanno oo aan la wadaagno hawshaada dhammaan qalabka iyo Bogga. Waxaa laga yaabaa inaan aqoonsano qalabkaaga si aan kuu siino khibrado shaqsiyeed iyo xayeysiis ku saabsan qalabka aad isticmaasho. Eeg annaga Siyaasadda cookie qaybta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aan ugu isticmaali karno teknoolojiyadaan ururinta macluumaadkan.
Waxaad awoodi kartaa inaad marin ka hesho astaamaha Bogga iyada oo loo marayo bulshooyinka xisbiga saddexaad, shirarka, iyo bogagga warbaahinta bulshada, adeegyada, fiilooyinka, iyo codsiyada ('Goobaha Warbaahinta Bulshada'). Dejintaada gaarka ah ee baraha bulshada sida, iyo sidoo kale siyaasadaha u gaarka ah ee gaarka ah, ayaa go'aamin doona macluumaadka shakhsiyeed iyo kuwa kale ee nala wadaagi kara, ama aan ka heli karno teknoolojiyada raadraaca warbaahinta bulshada, markaad gasho Bogga, oo laga yaabo inay tahay uruuriyay oo ay isticmaaleen Goobahan Warbaahinta Bulshada. Meeshii sharcigu oggol yahay, adoo siinaya Macluumaadkan ama haddii kale la macaamil goobahayaga iyada oo loo marayo Goobaha Warbaahinta Bulshada, waxaad oggolaatay isticmaalkayaga Macluumaadka ee Shabakadda Warbaahinta Bulshada iyadoo la raacayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Macluumaadka Goobta. Waxaan ururinaa macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee ku saabsan goobtaada, sida waddankaaga, markaad bixiso ama adoo adeegsanaya macluumaadka aaladda (sida cinwaanka IP-ga), ama meesha qalabkaagu ku yaal markii aad ku gashid Bogga adoo adeegsanaya qalabkaaga mobilada.
SIDA AAN U ISTICMAALO MACLUUMAADKAAGA
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka aan kaa aruurinno adiga ama aad na siiso annaga oo loogu talagalay ujeedooyinka lagu sharraxay siyaasaddan ama la shaaciyey waqtiga ururinta ama oggolaanshahaaga, oo ay ku jiraan ujeedooyinka soo socda:
Bixiyaan ama falanqeeyaan isticmaalkaaga Bogga iyo waxyaabaha ku jira, wax soo saarkooda, barnaamijyadooda, iyo adeegyadooda.
Buuxi codsiyadaada iyo ujeeddo kasta oo kale oo aad u bixiso, oo ay ku jiraan inay kula soo xiriiraan wixii ku saabsan iibsashadaada ama macaamilladaada.
Waxaan ku siin doonaa ogeysiisyo ku saabsan koontadaada ama rukunkaaga.
U dir macluumaad ku saabsan dallacsiinta, deeqaha, iyo astaamaha bogga.
Waan ku ogeysiin doonaa markaad ku guuleysato mid ka mid ah tartamadeena ama xatooyada.
Waan ku ogeysiin doonaa marka cusbooneysiinta bogga la heli karo, iyo isbeddelada ku yimaada wax soo saar ama adeeg kasta oo aan bixinno ama bixinno in kastoo ay tahay.
Bixiso, horumariso, dayactirto, shakhsiyeeyo, ilaaliso, oo hagaajiso khibradaada iyo waxyaabaha aan ku bixino barta.
Qiyaas cabirka dhagaystayaashayada iyo qaababka adeegsiga.
Ku kaydi macluumaadka ku saabsan doorbidkaaga, oo noo oggolaanaya inaan u habeynno boggeena iyadoo loo eegayo danahaaga gaarka ah.
Ka ilaali, cadee, kana hor tag khayaanada iyo waxqabadyada kale ee sharci darrada ah
Waan ku aqoonsan doonaa markaad isticmaaleyso Bogga.
Bixiso, suuq, oo xayeysii badeecadaha, barnaamijyada, iyo adeegyada annaga iyo kuwa aan xiriirka la leenahay, shuraakada ganacsiga, iyo xulo dhinacyo saddexaad oo adiga xiiso kuu leh. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa macluumaadka aan ururinno si aan ugu muujino xayeysiis dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee xayeysiistayaasha.
In aan fulino waajibaadkayaga isla markaana aan dhaqan galino xuquuqdeena ka soo baxda wixii qandaraasyo ah ee nala galo adiga iyo adiga, oo ay ku jiraan biil bixinta iyo aruurinta.
Baadhitaan, baadhitaan, iyo ka hortag waxqabadyada ka socda Boggeena oo jebin kara shuruudaheena, waxay noqon karaan kuwo khiyaano ah, ku xad gudbaya xuquuqda daabacaadda, ama xeerar kale ama ay noqon karto mid kale oo sharci daro ah, in la waafajiyo shuruudaha sharciga, iyo in la ilaaliyo xuquuqdeena iyo xuquuqda iyo amniga isticmaaleyaashayada iyo kuwa kale.
SIDEE AAN UGU QEYBGALAYO OO U SIFAYNAYNAA MACLUUMAADKAAGA
Waan wadaagi karnaa oo shaaca ka qaadi karnaa isku-darka iyo qeexida Macluumaadka ku saabsan isticmaaleyaasheena xaddid la'aan. Intaas waxaa sii dheer, waan wadaagi karnaa oo shaaca ka qaadi karnaa Macluumaadka aan aruurino, ama aad ku bixiso siyaabaha soo socda ama ujeedo kale oo la shaaciyey waqtiga ururinta:
Oggolaanshahaaga. Waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno Macluumaadkaaga markii aad na siiso ogolaanshahaaga inaan sidaa yeelno.
Adeeg Bixiyeyaasha. Qandaraasleyaashayada, bixiyeyaasha adeegga, bixiyeyaasha nuxurka, iyo dhinacyada kale ee saddexaad ee aan u adeegsanno inaan ku taageerno ganacsigeenna waxaa laga yaabaa inay helaan Macluumaad ka caawiya fulinta howlaha ay noo hayaan, sida, oo ay ka mid yihiin: abuurista, dayactirka, martigelinta, iyo bixinta Boggeena, wax soo saarka, iyo adeegyada; sameynta suuq-geynta, maaraynta lacagaha, emaylka iyo fulinta amarka; maamulida tartamada; sameynta cilmi baaris iyo falanqeyn; iyo adeegga macaamiisha.
Lahaansho Cusub. Iibsade ama beddel kale haddii ay dhacdo midow, quus, dib u habeyn, dib u habeyn, kala dirid ama iibin kale ama wareejinta qaar ama dhammaan hantideena, ha ahaato walaac socda ama qeyb ka mid ah musalafnimo, lacag saarid ama dacwad la mid ah, Macluumaadka aan ka hayno boggayaga iyo isticmaaleyaasheena ayaa ka mid ah hantida la wareejiyay.
ceesaan qas chihuahua miisaanka celcelis
Goobaha Isku Xidhan. Bogga waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal bogag kale, oo ay ku jiraan Goobaha Warbaahinta Bulshada. Waxaan isku dari karnaa barnaamijka arjiga barnaamijka warbaahinta bulshada ama fiilooyinka ('Plug-ins') ee shabakadaha bulshada, oo ay ku jiraan Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest iyo kuwa kale, boggeena. Plug-ins ayaa macluumaadkaaga adiga kugu saabsan u gudbin kara barnaamijka 'Plug-in' ee u gaarka ah iyadoon talaabo lagaa qaadin. Macluumaadkan waxaa ka mid noqon kara lambarkaaga aqoonsiga isticmaalaha barta internetka, websaydhka aad ku jirto, iyo in ka badan. La falgalinta Plug-in waxay si toos ah ugu gudbin doontaa macluumaadka shabakadda bulshada ee Plug-in macluumaadkaasna dadka kale ayaa ka arki kara bartaas. Plug-ins waxaa xukuma siyaasadaha gaarka ah ee madal u gaarka ah, mana ahan siyaasadeena.
Wada-hawlgalayaasha iyo bahwadaagta. Waxaan u siideyn karnaa Macluumaadka shirkadaha, shuraakada ganacsiga, iyo dhinacyada saddexaad (tusaale, tafaariiqleyda, xayeysiiyeyaasha, wakaaladaha xayeysiinta, shabakadaha xayeysiinta iyo barnaamijyada, ururada cilmi baarista, iyo shirkadaha kale) kuwaas oo dhaqankooda uusan daboolin Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, oo laga yaabo inay bixiso, bixiyaan, horumariyaan, suuq, iyo haddii kale ay kula soo xiriiraan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Si aad wax badan uga barato xulashooyinkaaga, fadlan hoos ka eeg doorashooyinkaaga. Waxaan sidoo kale la wadaagi karnaa Macluumaad gaar ah dhinacyada saddexaad si aan kuugu siino xayeysiin ku saleysan danahaaga. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg Xulashada Xayeysiiska ee hoose.
Damaanadqaadayaal iyo wada-dallacsiin. Waxaan mararka qaarkood bixinnaa waxyaabo ama barnaamijyo (tusaale, tartamo, xayeysiisyo, dallacsiinno, ama isdhexgalka baraha Bulshada) oo ay maalgeliyaan ama la wadaagaan qeybaha saddexaad. Xidhiidhyadan awgood, dhinacyada saddexaad waxay kaa ururinayaan ama kaa helayaan Macluumaad markaad kaqaybqaadato hawsha. Ma xakamayn karno adeegsiga dhinacyadan saddexaad ee Macluumaadkan. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad fiiriso siraha gaarka ah ee cid kasta oo seddexaad ah si aad wax uga ogaato ku dhaqanka dhaqankooda xogta kahor intaadan kaqeyb qaadan waxqabadka.
Ujeeddooyinka Sharci-fulinta iyo Sharciga. Waxaan siideyn karnaa macluumaadka si aan uga jawaabno nidaamka sharciga, tusaale ahaan annaga oo ka jawaabeyna amarka maxkamadda ama yeeriska, ama ka jawaabista dalabka hay'adda sharci fulinta. Waxaan sidoo kale u sifeyn karnaa Macluumaadka noocaas ah dhinacyada saddexaad: (i) ujeeddooyinka ilaalinta khayaanada iyo yareynta khatarta amaahda, (ii) halka aan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay in la baaro, laga hortago, ama la qaado tallaabo la xiriirta howlaha sharci darrada ah, (iii) si loo dhaqan geliyo xuquuqdeena ka dhalaneysa wixii qandaraasyo ah ee nala galay adiga iyo annaga, oo ay ku jiraan Shuruudaha Adeegsiga, Nidaamkan, iyo biilasha iyo ururinta, (iv) haddii aan aaminsanahay in shaacintu ay lagama maarmaan tahay ama ku habboon tahay ilaalinta xuquuqdeena, hantideena, ama nabadgelyadeena ama taas macaamiisheenna, isticmaaleyaasheena, qandaraasleyaasha ama kuwa kale, (v) sida sharcigu qabo.
Isgaarsiinta Suuqgeynta iyo La Wadaagga Qeybaha Saddexaad. Waad cusbooneysiin kartaa dookhyadaada adiga oo ixtiraamaya inaad naga hesho isgaarsiinta suuq-geynta qaarkood annaga, iyo wadaagista macluumaadka shaqsiyeed ee aan la leenahay dhinacyada saddexaad. Waxaad ku samayn kartaa adoo nagala soo xiriiraya barta privacy@ligseruveni.com . Waxa kale oo aad ka bixi kartaa helitaanka isgaarsiinta suuqgeynta iimaylka, adoo raacaya tilmaamaha 'ka-noqoshada' ee lagu bixiyo emayl kasta oo aad naga hesho. Waxa kale oo aad ku hagaajin kartaa ogeysiisyada riixitaankaaga aaladda moobaylka adoo adeegsanaya qalabkaaga ama dejimaha barnaamijka.
Xulashada Xayeysiiska. Waxaa laga yaabaa inaan la shaqeyno dhinacyada saddexaad si aan u soo bandhigno xayeysiinta, oo aan uga qeyb galno xog aruurinta, ka warbixinta, falanqaynta bogga, bixinta xayeysiinta iyo cabirka jawaabta ee ku saabsan Boggeena iyo websaydhada qeybta saddexaad iyo codsiyada waqtiga. Dhinacyadan saddexaad waxay adeegsan karaan cookies, beakons webka, pixels, iyo tikniyoolajiyad kale oo la mid ah si ay u qabtaan hawshan. Waxa kale oo laga yaabaa inay ka helaan macluumaad ku saabsan degellada aad booqato, codsiyada aad isticmaasho, iyo macluumaad kale oo ka socda daalacashadaada iyo aaladahaaga si ay u soo bandhigaan xayeysiis loo qaabeyn karo danahaaga boggayaga iyo bogagga kale. Xayeysiinta noocan ah waxaa loo yaqaan xayeysiis dulsaar ku saleysan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan xayeysiinta dulsaarka ku saleysan ee kombuyuutarkaaga ama biraawsarkaaga moobiilka, iyo awoodda aad uga bixi karto xayeysiinta noocan ah ee dhinacyada saddexaad, fadlan booqo Hindisaha Xayeysiinta Shabakadda iyo / ama DAA Barnaamijka Is-xakamaynta ee loogu talagalay Xayeysiinta Habdhaqanka ee Internetka . Si aad wax dheeraad ah uga ogaato xayeysiinta ku saleysan xiisaha ee barnaamijyada moobiilka iyo sida looga baxo xayeysiinta noocan ah ee dhinacyada saddexaad, waad booqan kartaa Xulashada . Fadlan ogow in xulasho kasta oo aad ka baxdo oo aad ku jimicsato barnaamijyadan ay khuseyso oo keliya xayeysiinta ku saleysan xiisaha ee dhinacyada saddexaad ee aad doorato laakiin wali waxay u oggolaan doontaa ururinta xogta ujeeddooyin kale, sida falanqaynta, cilmi baarista, iyo howlaha. Waxa kale oo laga yaabaa inaad sii wado helitaanka xayeysiinta, laakiin xayeysiintaasi waxay noqon kartaa mid aan khusayn danahaaga.
Xuquuqda Asturnaanta Kaliforniya Qaybta Sharciga Madaniga ah ee Kaalifoorniya 1798.83 waxay u oggol tahay dadka isticmaala boggeena kuwa deggan California inay codsadaan macluumaad gaar ah oo ku saabsan bixinta macluumaadka shakhsiyeed ee dhinacyada saddexaad ujeeddooyinka suuqgeynta tooska ah. Si aad u samayso codsi noocan oo kale ah, fadlan nagala soo xiriir halkan privacy@ligseruveni.com .
SIYAASADA COOKIE (KA baxsan EU)
Kukiyada iyo Teknolojiyada kale. Annaga, iyo kuwa ku xiran, bixiyeyaasha adeegga saddexaad, iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga ayaa 'cookies' u diri kara kombuyuutarkaaga ama adeegsan karnaa teknoolojiyad la mid ah si kor loogu qaado khibraddaada internetka ee Boggeena iyo iyada oo loo marayo xayeysiintayada iyo warbaahintayada internetka iyo barnaamijyada moobiilka.
Kukiyada waa faylal qoraal yar oo qoraal ah oo ay ku jiraan macluumaad lagu soo dejinayo qalabkaaga markaad booqato degel, oo ay ku jiraan Boggeena. Kukiyada ayaa markaa dib loogu celiyaa bogga asalka ah ee booqashooyinkaaga dambe ee boggaas. Inta badan bogagga shabakadda waxay ka kooban yihiin waxyaabo ka yimid dhowr degel websaydh sidaa darteed markii aad booqato degel internet, biraawsarkaagu wuxuu ka heli karaa buskudyo dhowr ilo ah. Kukiyada ayaa faa'iido leh maxaa yeelay waxay u oggolaadaan degel inuu aqoonsado aaladda isticmaaleha. Kukiyada waxay kuu oggolaaneysaa inaad si hufan ugu dhex wareegto boggaga internetka, xusuusnow dookhyada iyo guud ahaan hagaajinta khibrada isticmaalaha. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu xayeysiiyo xayeysiinta danahaaga adoo adeegsanaya raadinta shabakaddaada. Kukiyada fadhiga ayaa si otomaatig ah loo tirtiraa markaad xirto biraawsarkaaga iyo cookies-ka joogtada ah ayaa ku sii jiraya qalabkaaga ka dib markii biraawsarku xirmo (tusaale ahaan xusuusashada doorbidkaaga isticmaaleha ah markaad ku laabato Bogga).
Waxaan sidoo kale adeegsan karnaa pixels ama 'beacons web' oo kormeeraya isticmaalka Boggeena. Nalalka Websaydhadu waa faylalka elektaroonigga ah ee yar-yar ee lagu dhex daray Websaydhka ama is-gaadhsiinteenna (tusaale ahaan emayllada) oo noo oggolaanaya, tusaale ahaan, in la tiriyo isticmaaleyaasha booqday bogaggaas ama furay email ama tirakoobyada kale ee la xidhiidha. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa 'Qalabka horumarinta Barnaamijka' ('SDKs') barnaamijyadeenna si aan u qabanno hawlo isku mid ah sida 'cookies' iyo shabakadaha internetka. Tusaale ahaan, SDKs waxay soo aruurin karaan macluumaadka farsamada iyo adeegsiga sida aqoonsiyeyaasha qalabka mobilada iyo isdhexgalkaaga Bogga iyo barnaamijyada kale ee mobilada.
Waxaan u adeegsan karnaa cookies-ka iyo teknoolojiyada kale si aan uga caawino aqoonsiga biraawsarkaaga ama aaladdaada, dayactirka waxyaabaha aad doorbideyso, inaad siiso astaamaha bogga qaarkood, oo aan soo aruurino Macluumaadka ku saabsan isdhexgalka Boggeena, waxyaabahayaga, iyo isgaarsiintayada
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa cookies-ka iyo teknoolojiyada kale (i) si aan u siino, u horumarino, u ilaalino, shaqsiyeeyo, u ilaalino, una wanaajinno Boggeena, wax soo saarkeena, barnaamijyadeena, iyo adeegyadeena iyo in aan ku shaqeyno ganacsigeena, (ii) si aan u sameyno falanqeyn, oo ay ka mid yihiin falanqeynta iyo warbixin ku saabsan adeegsiga iyo waxqabadka Boggeena iyo qalabka suuqgeynta, (iii) si looga hortago, loo aqoonsado, loogana hortago khayaanada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah, (iv) si loo abuuro xog isugeyn ah oo ku saabsan kooxaha ama qeybaha isticmaaleyaasheena, (v) si loo waafajiyo adeegsadayaasha dhammaan qalabka, shirkadaha, wada-hawlgalayaasha ganacsiga, iyo xulashada dhinacyada saddexaad, iyo (vi) annaga iyo kuwa ku xiran, wada-hawlgalayaasha ganacsiga, iyo xulashada dhinacyada saddexaad si loo bartilmaameedsado, loo bixiyo, ama loo suuq geeyo, wax soo saarka, barnaamijyada, ama adeegyada. Kukiyada iyo tikniyoolajiyadaha kale waxay sidoo kale fududeeyaan oo cabbiraan waxqabadka xayeysiinta lagu soo bandhigay ama la keenay annaga ama annaga iyo / ama shabakadaha kale ama bogagga. Adoo booqanaya Bogga, ha ahaato isticmaale diiwaangashan ama haddii kale, waad qiraysaa, oo aad oggoshahay inaad na siineyso oggolaanshahaaga si aan ula socono dhaqdhaqaaqyadaada iyo isticmaalkaaga bogga iyada oo loo marayo tiknoolajiyada kor lagu soo sheegay, iyo sidoo kale tiknoolajiyada la midka ah ee la soo saaray mustaqbalka , iyo in aan u isticmaali karno tikniyoolajiyaddan raadraaca ee emayllada aan kuu soo dirno.
Waad hagaajin kartaa biraawsarkaaga si aad u diiddo cookies. Xakamaynta kukiyada adoo adeegsanaya kontaroolada biraawsarka ma xaddidi karaan adeegsiga tikniyoolajiyadda kale. Fadlan la tasho dejinta biraawsarkaaga wixii macluumaad dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, xannibaadda cookies ama tiknoolajiyada la midka ah ayaa kaa horjoogsan doonta inaad gasho qaar ka mid ah waxyaabahayaga ama astaamaha bogga. Hadda kama jawaabno calaamadaha Ha Raadsan maxaa yeelay weli heer farsamo oo isku mid ah weli lama soo saarin. Waxaan sii wadeynaa inaan dib u eegis ku sameyno teknolojiyadda cusub waxaana suuragal ah inaan qaadanno halbeeg marka mid la abuuro.
Maareynta Kukiyada iyo Teknolojiyadaha kale
Kukiyada adag ee daruuriga ah
Kukiyadaani waa lama huraan si ay kuugu suurta geliso inaad ku dhex wareegto bogga oo aad u isticmaasho astaamaheeda. Iyadoo aan lahayn buskudyadan, adeegyadii aad codsatay (sida marin u dhexaynta bogagga) lama bixin karo. Liistada soo socota waxay dejineysaa tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
Waxaan u isticmaalnaa xogta ku kaydsan cookie-kan maamulka nidaamka, si loo wanaajiyo amniga, loona siiyo marin u helidda howlaha looga baahan yahay goobta
Macluumaad Dheeraad ah: cookie-ga kal-fadhiga (wuxuu dhacayaa marka biraawsarka la xidho)
Waxaan u adeegsanaa cookies-ka falanqaynta si aan u falanqeyno sida martidayadu u adeegsadaan Barta iyo inay ula socdaan waxqabadkooda. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan siino khibrad tayo sare leh adoo u habeynayna waxyaabaha aan bixinno isla markaana si deg deg ah u aqoonsanno una xallinno wixii arrimo ah ee soo kordha. Tusaale ahaan, waxaan u adeegsan karnaa cookies-ka waxqabadka si aan ula socono bogagga ugu caansan, habka isku xirka bogagga ayaa ugu waxtar badan, iyo in la go'aamiyo sababta bogagga qaarkood ay u helaan farriimaha qaladka ah. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa kukisyadan si aan u muujino maqaallada ama adeegyada Bogga ee aan u maleyneyno inay adiga kugu daneynayaan adiga oo ku saleynaya isticmaalkaaga Bogga. Macluumaadka ay soo ururiyeen kukisyadan kuma xirna macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed annaga ama qandaraasleyaasheena waxaana loo isticmaalaa oo keliya wadar ahaan iyo foomka la aqoonsaday. Liistada soo socota waxay dejineysaa tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
Source cookie: Falanqaynta Google
Kukiyadaas waxaa loo isticmaalaa in lagu ururiyo macluumaadka ku saabsan sida booqdayaashu u adeegsadaan bartayada. Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka si aan u soo uruurino warbixinno iyo inay naga caawiso inaan horumarinno boggeena. Kukiyada waxay ku ururiyaan macluumaadka qaab aan la garanayn, oo ay ku jiraan tirada dadka soo booqday goobta, halkaasoo martidu ka yimaadeen goobta iyo bogagga ay booqdeen.
Halkan guji si aad uhesho siyaasada asturnaanta Google ee laxiriirta Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Waad ka bixi kartaa raadinta Google Analytics adoo booqanaya: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Kukiga Source: Mouseflow
Waxaan u adeegsanaa Mouseflow si aan u soo qabanno macluumaadka isticmaalaha aan la shaacin sida ay booqdayaasha degelku ula falgalaan waxyaabaha ku jira bogga. Waxaan u isticmaalnaa xogtan aan la aqoonsan si aan ugu gudbino jawaab celin ku saabsan khibrada goobta oo hagaagtay ee isticmaalayaasha.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo, waxaad ku samayn kartaa halkan https://mouseflow.com/opt-out.
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kuu siino shaqooyin gaar ah. Tusaale ahaan, fiirinta waxyaabaha fiidiyowga, durdurrada tooska ah, ama xusuusinta xulashooyinka aad sameyso iyo inaad siiso sifooyin shaqsiyeed kor loo qaaday iyo inbadan. Kukiyadaas looma adeegsan karo raadinta bogaggaaga. Liistada soo socota waxay dejineysaa tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
Xayeysiiska cookie: Google Ajax Search
Cookie-kani wuxuu ku siinayaa nooca typehead-ka laga heli karo baararka guud ahaan barta. Tani waxay bixisaa talo soo jeedin ereyada muhiimka ah waxayna ka caawisaa nadiifinta weydiimaha raadinta.
Cookie-ka kulanka (wuxuu dhacayaa marka biraawsarka la xiro)
Kukiyada xayeysiinta (ama bartilmaameedka cookies) waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan caadooyinka daalacashada ee la xiriira qalabkaaga waxaana loo isticmaalaa inay ka dhigaan xayeysiinta mid adiga iyo danahaaga khuseysa. Kukiyadaani waxay sidoo kale cabiraan waxtarka ololayaasha xayeysiinta waxayna raadinayaan in xayeysiisyada si fiican loo soo bandhigay. Liistada soo socota waxay dejineysaa tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
Source cookie: DoubleClick
DoubleClick waxay isticmaashaa cookies si loo wanaajiyo xayeysiinta. Qaar ka mid ah codsiyada guud waa in lagu bartilmaameedsado xayeysiinta iyadoo lagu saleynayo waxa ku habboon isticmaalaha, si loo wanaajiyo ka warbixinta waxqabadka ololaha, iyo in laga fogaado muujinta xayeysiiska uu isticmaalehu horay u arkay.
Halkan guji siyaasadaha asturnaanta Google ee laxiriira DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Waad ka bixi kartaa raadinta DoubleClick adoo booqanaya https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Source Cookie: Facebook Pixel
Waxaan u adeegsanaa Facebook pixel qaab ah faham wanaagsan oo ku saabsan isticmaaleyaasheena, si loo habeeyo waxyaabaha iyo xayeysiinta, si loo bixiyo astaamaha warbaahinta bulshada iyo in lagu falanqeeyo taraafikada goobta. Xogta la soo ururiyey weli lama aqoonsan. Tani waxay ka dhigan tahay inaanan arki karin xogta shaqsiyeed ee shaqsi kasta oo adeegsada. Si kastaba ha noqotee, xogta la ururiyey waxaa keydiyay oo farsameeyay Facebook.
Facebook wuxuu awood u leeyahay inuu isku xiro xogta koontadaada Facebook isla markaana u adeegsado xogta ujeeddooyin xayeysiin u gaar ah, iyadoo la raacayo siyaasaddooda gaarka ah ee hoos ku xusan: https://www.facebook.com/about/privacy/
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo, waxaad ku samayn kartaa halkan https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Kukiyada Xayeysiinta waxaa isticmaali kara baraha bulshada ee kuxiran Boggeena, sida badhanka 'Share' ama maqal / fiidiyowyo ciyaartooyo gundhig ah. Kukiyadaani waxay sidoo kale bixiyaan shaqooyinka la codsaday. Bogagga warbaahinta bulshada ee noocan oo kale ah ayaa dhigaya cookies-ka xayeysiinta ah labadaba markaad booqanayso boggayaga iyo markaad adeegsanayso adeegyadooda oo aad ka fogaanayso bartayada. Dhaqanka buskudka qaar ka mid ah baraha bulshada waxaa lagu qeexay hoos:
Siyaasadda cookie ee Facebook
Siyaasadda cookie ee Twitter
Siyaasadda cookie ee Instagram
Siyaasadda cookie ee Pinterest
Siyaasadda cookie ee YouTube
Siyaasadda cookie ee SoundCloud
Siyaasadda Kukiyada ee Google Plus
HELITAANKA, SAXAYNTA IYO KA HELISTA MACLUUMAADKAAGA
Si aad wax uga weydiiso macluumaadka shakhsiga ah ee aan kaa soo aruurinnay khadka tooska ah ee laga helo Barta ay ku dhegan tahay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ama si loo saxo macluumaadka shakhsiga ah, waxaad noo soo diri kartaa emayl privacy@ligseruveni.com . Waad codsan kartaa oo aad heli kartaa ka-qaadista wax ku biirintaada isticmaale ahaan emayl ahaan privacy@ligseruveni.com iyadoo la adeegsanayo dalabkaaga oo la cayimay ku darsashada gaarka ah ee isticmaale ee aad rabto inaad ka saarto. Ma aqbali karno codsi ah in la beddelo ama la tirtiro wixii macluumaad ah haddii aan aaminsanahay in tallaabadaas ay jabineyso sharci kasta ama shuruudo sharci ama ay sababi karto in macluumaadka uu khaldan yahay. Ka saarida ku darsigaaga isticmaale ee barta ma hubinayso in gabi ahaanba ama dhammaystir buuxa ee ka qayb qaadashada isticmaaleyaashan laga helo bogga maaddaama nuqullada laga sii arki karo bogagga keydka ah iyo kuwa la keydiyay ama laga yaabo in la soo minguuriyay ama lagu kaydiyey isticmaaleyaasha kale ee Goobta. Waad ka saamixi kartaa joornaal kasta ama emayllo xayeysiis kala duwan ah wakhti kasta adoo gujinaya xiriiriyeyaasha 'ka-noqoshada' ee lagu bixiyo isgaarsiinta noocaas ah. Kama bixi kartid isgaarsiinta la xiriirta bogga, sida xaqiijinta koontada, xaqiijinta iibsashada iyo farriimaha maamulka, illaa inta aad ka diiwaangashan tahay Bogga.
Goobta waxaa lagu martigaliyay Mareykanka. Waxaan ku xadidi karnaa helitaanka Goobta ama adeeg kasta ama badeecad lagu sharaxay Bogga qof kasta ama aag juqraafi ah waqti kasta. Haddii aad dooratid inaad ka soo gasho bogga dibedda Mareykanka, waxaad ku sameyn kartaa halistaada.
Waxaan u hirgelinay tallaabooyin farsamo iyo abaabul oo ku habboon amniga Goobta. Nasiib darrose, isku gudbinta macluumaadka ee internetka iyo aaladaha moobiilku si buuxda ammaan uma aha. In kasta oo aan qaadanno ilaalinno macquul ah si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed, ma ballan qaadi karno amniga macluumaadkaaga shakhsiyeed. Ku gudbinta macluumaadka shakhsiga ah ee internetka waxaad halis ugu jirtaa naftaada. Annaga mas'uul kama nihin in la hareer maro wax kasta oo asturnaanta ama tallaabooyinka amniga ee aan bixino. Badbaadada iyo amniga macluumaadkaaga sidoo kale adiga ayey kugu xiran tahay. Meeshii aan ku siinnay (ama meeshii aad dooratay) eray sir ah oo aad ku geli karto qaybo ka mid ah Boggeena, adiga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta sirta sirta ah. Waa inaadan la wadaagin lambarkaaga sirta ah cidna.
Waxaan cusbooneysiin karnaa Siyaasadeena waqti ka waqti. Waxaan kuu soo sheegi doonaa wixii ku saabsan wixii isbeddel ah ee ku yimaada Nidaamkan Asturnaanta adoo ogeysiis ku dhejinaya Boggeena. Waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad xilli-xilli dib u hubiso oo aad dib-u-eegto Siyaasaddan si aad uga warqabto wixii isbeddello ah ee dhowaanahan dhaca.
SIDEE NAGALA SOO XIRIIRI
Waxyaabaha Asturnaanta. Haddii aad wax walaac ah ama cabasho ah ka qabtid arrimaha gaarka ah ee Barta, fadlan nagala soo xiriir Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., Dabaqa 9aad, Bariga Hollywood , CA, 90069, USA ama email noogu soo dir cinwaanka privacy@ligseruveni.com . Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan kuugu soo jawaabi karno waqti ku habboon oo xirfad leh si aan uga jawaabno su'aalahaaga oo aan u xallinno welwelkaaga. Und Hundeshagen Digital Media, LLC. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. Purpleclover iyo Purpleclover.com waa calaamadaha ganacsiga ee Hundeshagen Digital Media, LLC
Ogeysiiska Asturnaanta ee loogu talagalay dadka degan Kaliforniya
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Janaayo 1, 2020
Ogeysiiskan gaarka ah ee loogu talagalay dadka degan KALIFORNIA wuxuu ku darayaa macluumaadka ku jira Nidaamkan Khaaska ah wuxuuna khuseeyaa oo keliya booqdayaasha, isticmaaleyaasha, iyo dadka kale ee deggan Gobolka Kalifoorniya ('macaamiisha' ama 'idinka'), waxayna bixisaa macluumaad ku saabsan xuquuqda macaamiisha ee hoos imanaya Sharciga Asturnaanta Macaamiisha Kalifoorniya ee 2018 ('CCPA') iyo sharciyada kale ee gaarka ah ee California. Shuruudo kasta oo lagu qeexay CCPA waxay leeyihiin macno isku mid ah markii loo adeegsaday ogeysiiskan.
Waxaan ururinaa macluumaad tilmaamaya, xiriir la leh, sharraxaya, tixraacyo, awood u leh in lala xiriiro, ama macquul ahaan loola xiriiriyo, si toos ah ama si aan toos ahayn, ula macaamil gaar ah ama qalab ('macluumaadka shakhsiyeed'). Gaar ahaan, waxaan soo aruurinay qaybaha soo socda ee macluumaadka shaqsiyadeed ee ku saabsan macaamiisha laba iyo tobankii (12) bilood ee la soo dhaafay:
Internet ama hawlo kale oo shabakadeed oo la mid ah (sida taariikhda baalashada)
Xogta deegaanka (sida goobta saxda ah ee qalabkaaga)
Macluumaadka shaqsiyeed kuma jiraan:
Macluumaadka dadweynaha ee laga heli karo diiwaanka dawladda.
Macluumaadka macaamilka ee la cadeeyay ama la isku daray.
Macluumaadka laga reebay baaxadda CCPA, sida:
macluumaadka caafimaadka ama caafimaadka ee ku jira Caymiska Caafimaadka La Xisaabtanka iyo La Xisaabtanka Sharciga ee 1996 (HIPAA) iyo Sharciga Qarsoodiga Kalifoorniya ee Macluumaadka Caafimaadka (CMIA) ama xogta tijaabada caafimaadka;
macluumaadka shaqsiyeed ee ay daboolayaan qawaaniinta gaarka ah ee gaarka ah ee waaxda, oo ay kujiraan Sharciga Warbixinta Xaqsiinta (Credit Credit) (FRCA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) ama Sharciga Asturnaanta Macluumaadka Dhaqaalaha ee California (FIPA), iyo Xeerka Ilaalinta Asturnaanta Darawalnimada ee 1994.
Waxaan si otomaatig ah u soo ururin karnaa macluumaadka farsamada iyo adeegsiga qaarkood markaad isticmaaleyso Boggeena ama aad la falgaleyso xayeysiisyada iyo waxyaabaha ku jira qadka, sida nooca qalabka, biraawsarka, iyo nidaamka qalliinka aad isticmaaleyso, aqoonsi qalab gaar ah, cinwaanka IP-ga, aaladda iyo dejimaha biraawsarka. , bogagga aad booqato, macluumaadka ku saabsan sida aad ula macaamisho Boggayaga iyo kuwa la-hawlgalayaashayada saddexaad (sida bogagga aad booqatay), iyo macluumaadka noo oggolaanaya inaan aqoonsanno oo aan la wadaagno hawshaada dhammaan qalabka iyo websaydhyada. Waxaa laga yaabaa inaan aqoonsano qalabkaaga si aan kuu siino khibrado shaqsiyeed iyo xayeysiis ku saabsan qalabka aad isticmaasho.
Fadlan la soco in shirkadaha qaarkood ay dhigaan tikniyoolajiyada raadraaca sida cookies-ka boggeena kaas oo u oggolaanaya shirkadahaas inay helaan macluumaadka ku saabsan waxqabadkaaga ee boggayaga la xiriira biraawsarkaaga ama qalabkaaga. Eeg annaga Siyaasadda cookie (ka baxsan EU) kor ku xusan wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan raadinta boggeena iyo sida aan ugu isticmaali karno teknoolojiyadaan ururinta macluumaadkan. Shirkadahaani waxay u adeegsan karaan xogtaas si ay kuugu habbeeyaan adiga adiga iyo inay kuugu adeegaan xayeysiisyo dheeri ah oo ku habboon Boggeena ama kuwa kale, annaga oo metelayna iyo magaca xayeysiistayaasha kale. Haddii aad sameysid codsi ka-bax, oo aad jeclaan lahayd inaad ka-baxdo raad-raaca ku-salaysan cookie ee ujeeddooyinka xayeysiinta, fadlan la soco inaad u baahan doonto inaad si gooni gooni ah u hagaajiso goobaha biraawsarkaaga oo aad dejiso doorbidkaaga sida lagu sharxay Siyaasadda cookie (ka baxsan Midowga Yurub) kor ku xusan.
Waxaad awoodi kartaa inaad marin uga hesho astaamaha barta bulshada, goleyaasha, iyo baraha bulshada, adeegyada, fiilooyinka, iyo codsiyada ay abuureen bixiyeyaasha warbaahinta bulshada ('Goobaha Warbaahinta Bulshada'). Dejintaada gaarka ah ee barahaas bulshada, iyo sidoo kale siyaasadaha u gaarka ah, ayaa go'aamin doona macluumaadka shakhsiyeed iyo kuwa kale ee nala wadaagi kara, ama aan ka heli karno, iyada oo loo marayo tiknoolajiyada raadraaca warbaahinta bulshada markii aad gasho Bogga, iyo uruuriyay oo ay isticmaaleen Goobahan Warbaahinta Bulshada. Meeshii sharcigu oggol yahay, adoo siinaya Macluumaadkan ama haddii kale la macaamil boggeena iyada oo loo marayo Goobaha Warbaahinta Bulshada, waxaad ogolaatay inaad u isticmaasho Macluumaadka Shabakadda Warbaahinta Bulshada iyadoo la raacayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Macluumaadka Goobta. Waxaan ururinaa macluumaadka ku saabsan goobtaada guud, sida waddankaaga ama cinwaankaaga IP. Waxaan soo aruurineynaa goobta saxda ah ee qalabkaaga marka aad kuhesho Bogga adoo adeegsanaya qalabkaaga mobilada. Macluumaadkan oo dhan lama wada hayo, oo dhammaan macluumaadkaan adiga kulama xiriiri karo.
SIDA AAN U ISTICMAALO MACLUUMAADKA QOFKA
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka shakhsiyeed ujeedooyinka lagu sharraxay siyaasaddan ama la shaaciyay waqtiga ururinta ama oggolaanshahaaga, oo ay ku jiraan ujeedooyinka soo socda:
Bixiso, suuq, oo xayeysii badeecadaha, barnaamijyada, iyo adeegyada annaga iyo kuwa nala shaqeeya, iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga ee adiga xiisaha kuu leh. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa macluumaadka aan ururinno si aan ugu muujino xayeysiis dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee xayeysiistayaasha.
Xaqiiji aqoonsigaaga marka loo eego codsiyada CCPA ee halkan lagu sameeyay.
ISHAGAARADA AAN KA SOO XULAYNO MACLUUMAADKA QOFKA
Waxaan si toos ah uga soo ururineynaa macluumaadka shakhsiyeed aaladahaaga. Waxaan u adeegsanaa aaladaha raadraaca si aan u ururino macluumaadka markaad isticmaaleyso ama aad la falgaleyso Bogga, xayeysiimahayaga iyo waxyaabaha ku jira internetka, iyo emaylladayada.
Waxaan ka soo ururin karnaa macluumaadka shakhsiyeed keydka macluumaadka dadweynaha.
Waxaan ka helnaa macluumaadka shaqsiyeed alaab-qeybiyeyaasha aan shaqaalaysiinno inay ku shaqeeyaan annaga oo metelayna. Tusaale ahaan, iibiyeyaasha martigelinaya ama dayactiraya degelladayada oo noo soo diraya emayl dhiirrigelin ah ayaa laga yaabaa inay na siiyaan macluumaad.
Waxaan ka heli karnaa macluumaadka shakhsiyeed dhinacyada kale, sida marka wada-hawlgalayaasha suuq-geynta ama shabakadaha xayeysiinta ay nala wadaagaan macluumaadka. Waxaan sidoo kale macluumaad ka heli karnaa Goobaha Warbaahinta Bulshada, sida kor lagu sharaxay.
SIDEE AAN UGU QEYBGALAYO UUNNA U SIIBAYNO MACLUUMAADKAAGA QOFKA AH
Waxaa laga yaabaa inaan u siino macluumaadkaaga shaqsiyeed dhinacyada kale ujeedooyinkeena ganacsi. Labadii iyo tobbankii (12) bilood ee kahoreeyay, waxaan soo bandhignay qeybta soo socota ee macluumaadka shaqsiyadeed ujeedooyinkeena ganacsi:
Waxaan u soo bandhigi karnaa qaybta kor ku xusan ee macluumaadka shakhsiyeed ujeeddooyinkeena ganacsi qeybaha soo socda ee dhinacyada:
Qaybaha saddexaad ee aad adigu ama wakiiladaadu noo fasaxayso inaanu siino macluumaadkaaga shaqsiyeed ee la xiriira alaabada ama adeegyada aan ku siino.
Labadii iyo tobbankii (12) bilood ee kahoreeyay, ma aanan iibinin wax macluumaad shaqsi ah sida ku cad fahamkeena CCPA. Shirkadu ma iibin doonto macluumaadkaaga shakhsiyeed mustaqbalka, sida ku cad fahamkeena CCPA, iyadoon ku siin ogeysiis adiga oo aan ku siinaynin fursad aad kaga baxdo wakhtigaas.
XUQUUQDAADA IYO XULASHADAADA
CCPA waxay siisaa macaamiisha (dadka degan California) xuquuq gaar ah oo ku saabsan macluumaadkooda shaqsiyeed. Qaybtani waxay sharraxaysaa xuquuqdaada CCPA waxayna sharraxaysaa sida loogu dhaqmo xuquuqdaas.
Helitaanka Macluumaadka Gaarka ah iyo Xuquuqda Xisaabtanka Xogta
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato inaan kuu siino macluumaad qaas ah oo ku saabsan ururinta iyo isticmaalka macluumaadkaaga shaqsiyeed 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Marka aan helno oo aan xaqiijinno codsigaaga macaamilka, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa qaar ama dhammaan waxyaabaha soo socda iyadoo kuxiran dalabkaaga:
Qaybaha gaarka ah ee macluumaadka shakhsiga ah ee aan kaa soo aruurinay (sidoo kale loo yaqaan codsi xog qaadasho).
Noocyada macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa soo aruurinnay.
Qeybaha ilaha macluumaadka shakhsiga ah ee aan kaa soo aruurinay.
Ganacsigeena ama ujeedkeena ganacsi ee aruurinta ama iibinta macluumaadkaas shaqsiyadeed.
Qaybaha dhinacyada kale ee aan la wadaagno macluumaadkaas shaqsiyeed.
Haddii aan iibinay ama aan shaaca ka qaadnay macluumaadkaaga shaqsiyeed ujeeddo ganacsi, laba liis oo kala duwan oo shaacinaya:
iibinta, aqoonsashada qaybaha macluumaadka shaqsiyeed ee qayb kasta oo qaataha uu iibsaday; iyo
shaacinta ujeeddo ganacsi, aqoonsashada qaybaha macluumaadka shaqsiyeed ee qayb kasta oo qaataha helay.
Xuquuqda Codsiga Tirtirida
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato inaan tirtirno wixii macluumaad ah ee shaqsiyeed ee aan kaa soo aruurinay oo aan haynay, iyadoo laga yaabo in laga reebo waxyaabo gaar ah. Mar alla markii aan helno oo aan xaqiijinno codsigaaga macaamilka, waan tirtiri doonnaa (oo waxaan u tilmaami doonnaa bixiyeyaasha adeeggayaga inay tirtiraan) macluumaadkaaga shaqsiyeed ee ku jira diiwaankayaga, haddii laga reebo wixii khuseeya
Helitaanka Jimicsi, Xogta La Qaadan karo, iyo Xuquuqda Tirtirida
Si loo jimicsado marin u helka, u-qaadista xogta, iyo xuquuqda tirtirka kor lagu sharaxay, fadlan noo soo gudbi codsi macaamil midkoodna:
Naga soo wac: 1-866-522-5025
Iimayl noogu soo dir: privacy@ligseruveni.com
Kaliya adiga ama qof aad u idmantahay inuu ku matalo magacaaga, ayaa sameyn kara codsi macaamil oo la xiriira macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Kaliya waxaad sameyn kartaa codsi macaamil oo ah marin u helid ama xog qaadid laba jeer muddo 12 bilood gudahood ah. Codsiga macaamilku waa inuu:
Keen cinwaan emayl sax ah, lambar taleefan, cinwaan ama macluumaad kale oo kugu filan oo noo ogolaada inaan si macquul ah u xaqiijino inaad tahay qofka aan ka soo ururinay macluumaadkaaga shakhsiyeed ama wakiil idman.
Ku sifee dalabkaaga faahfaahin ku filan oo noo ogolaaneysa inaan si sax ah u fahanno, u qiimeyno, ugana jawaabno.
Kama jawaabi karno dalabkaaga ama kuma siin karno macluumaad shaqsiyeed haddii aanan xaqiijin karin aqoonsigaaga ama awoodda wakiilkaaga si aan u codsanno una xaqiijinno macluumaadka shaqsiyeed ee adiga kugu saabsan. Sameynta codsi macaamil ah uma baahnid inaad xisaab nala sameysato. Waxaan kaliya u isticmaali doonnaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagu bixiyay codsiga macaamilka si loo xaqiijiyo aqoonsiga codsadaha ama awoodda uu u leeyahay inuu sameeyo dalabka.
Waqtiga Jawaabta iyo Qaabka
Waxaan isku dayeynaa inaan uga jawaabno dalab macaamil la xaqiijin karo muddo 45 maalmood gudahood ah laga soo bilaabo markii la helay. Haddii aan u baahanno waqti dheeri ah (illaa 90 maalmood), waxaan kuugu soo wargelin doonnaa sababta iyo muddada kordhinta oo qoraal ah. Haddii aad koonto nala leedahay, waxaan ku geyn doonnaa jawaabtayada qoran ee koontadaas. Haddii aadan xisaab nagu haysan, waxaan kuugu soo diri doonnaa jawaabteena qoran boostada ama elektaroonig ahaan, ikhtiyaarkaaga ah. Siidaynta kasta oo aan bixinno waxay dabooli doontaa oo keliya muddada 12-ka bilood ee ka horreysa helitaanka codsiga. Jawaabta aan bixinno waxay sidoo kale sharxaysaa sababaha aan ugu hoggaansami karin codsi, haddii ay khuseyso. Codsiyada gudbinta xogta, waxaan dooran doonnaa qaab aan ku siino macluumaadkaaga shaqsiyadeed oo si fudud loo isticmaali karo waana inaan kuu oggolaanaa inaad ka gudbiso macluumaadka hal hay'ad illaa hay'ad kale adigoon caqabad ku ahayn.
Isbedelada Ogeysiiska Asturnaanta
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka baddalno ogeysiiskan asturnaanta annaga oo aan u go aansanno iyo waqti kasta. Markii aan isbeddel ku sameyno ogeysiiska asturnaanta, waxaan kugu soo wargelin doonnaa ogeysiis ku saabsan degelkeenna websaydhka.
Haddii aad leedahay wax walaac ah ama cabasho ah oo ku saabsan asturnaanta Bogga, siyaabaha aan u ururinno una adeegsanno macluumaadkaaga shakhsiyeed, xulashooyinkaaga iyo xuquuqda aad u leedahay isticmaalka noocaas ah, ama aad rabto inaad ku isticmaasho xuquuqdaada sharciga California, fadlan haka waaban inaad nala soo xiriirto at Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Arimaha Sharciga, Xarunta Naqshadeynta Baasifigga, Dhismaha Dhismaha Dhismaha Galbeedka, 750 N. San Vicente Blvd., Dabaqa 9aad, Bariga Hollywood, CA, 90069, USA, noogu soo dir emailka privacy@ligseruveni.com ama wac 1-866-522-5025.
SIYAASADDA QARSIGA EE ISTICMAALAYAASHA EU
Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, kuwa ku xiran iyo kuwa hoos yimaada ('Hundeshagen', 'we', 'us', ama 'our') waxay qiimeeyaan asturnaanta isticmaaleyaasheena iyo macaamiisheena. Waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono mid hufan oo ku saabsan sida aan u ururino una adeegsanno Macluumaadkaaga (sida hoos lagu qeexay), si aan u ilaalino Macluumaadkaaga oo aan kuu siino xulashooyin macno leh. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ('Siyaasadda') ayaa sharraxaysa habdhaqanka asturnaanta ee www.ligseruveni.com websaydhka ('Site'), oo ay leedahay, oo ay maamusho, gebi ahaan ama qayb ahaan, Hundeshagen. Nidaamkani wuxuu sharxayaa sida macluumaadkaaga loo ururiyo, loo isticmaalo, loona shaaciyo Hundeshagen oo ah maamule xogta.
Nidaamkani wuxuu khuseeyaa ku-dhaqankayaga macluumaadka khadka tooska ah ee Barta iyadoo la tixgelinayo adeegsadayaasha ka tirsan Midowga Yurub. Nidaamkani ma khuseeyo xogta shakhsi ahaaneed ee laga soo ururiyey websaydh ama barnaamijyo dhinac saddexaad ah, oo ay ku jiraan degello aad ka heli karto bogga. Websaydhyada iyo barnaamijyadu waxay lahaan karaan siyaasado u gaar ah, oo aan kugu dhiirrigelinno inaad aqriso ka hor inta aanad bixin macluumaad shakhsi ah iyaga ama iyaga loo soo marin.
Fadlan si taxaddar leh u akhri Siyaasaddan si aad u fahamto siyaasadahayaga iyo dhaqammadayada la xiriira Macluumaadkaaga iyo sida aan ula dhaqmi doonno. Haddii aadan ku raacsaneyn siyaasadahayaga iyo dhaqankayaga, ha isticmaalin Bogga. Adoo adeegsanaya Bogga, waxaad ku raacsan tahay Siyaasaddan. Siyaasaddan way is beddeli kartaa waqti ka waqti. Isticmaalkaada joogtada ah ee Bogga ka dib markaan isbeddelada sameyno waxaa loo arkaa inay aqbalayaan isbeddeladaas, markaa fadlan ka hubi Siyaasadda xilli-xilliyeed wixii cusbooneysiin ah.
Boggeena waxaa lagu martigaliyay Mareykanka. Tani waxay ka dhigan tahay Macluumaadka aan ururinno annaga ayaa ka baaraandegi doonna Mareykanka, waddan leh heer ka hooseeya ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed marka loo eego Midowga Yurub. Si kastaba ha noqotee, maadaama aan u fidinno Boggeena iyo adeegyadeena deganayaasha Midowga Yurub, Hundeshagen sidaas darteed sidoo kale waxay ku xiran tahay sharciyada ilaalinta xogta Yurub, gaar ahaan Xeerka Ilaalinta Xogta Guud ee EU (GDPR).
Hundeshagen waxay ku guda jirtaa magacaabista wakiilka EU waxayna kugula socodsiin doontaa iyada oo la cusbooneysiinayo Nidaamkan markii wakiilka EU la magacaabo.
Waxaan u adeegsanaa qalab la mid ah heshiisyada caadiga ah ee qandaraaska iyadoo la raacayo GDPR marka la wareejinayo<
Macluumaadkaaga ka baxsan Midowga Yurub ama dhinacyada saddexaad.Waxaan sidoo kale xaddidi karnaa helitaanka Goobta ama adeeg kasta ama badeecad lagu sharaxay Bogga qof kasta ama aag juqraafi ah waqti kasta.
CARRUURTA DA'DA 16 KA
Boggan looguma talagalin carruurta da'doodu ka yar tahay 16 sano jir, annaguna si ogaan ah uma ururinno macluumaadka shakhsiyeed carruurta ka yar 16 jir. Haddii aan ogaano inaan ka ururinay ama ka helnay macluumaad shakhsi ahaaneed ilmo ka yar 16 jir annaga oo aan hubin oggolaanshaha waalidka, waan tirtiri doonnaa macluumaadkaas. Haddii aad rumeysan tahay inaan wax macluumaad ah ka heleyno ama ku saabsan ilmo ka yar 16 sano, fadlan nagala soo xiriir privacy@ligseruveni.com
Waxaan ururin karnaa iskuna dari karnaa noocyada kala duwan ee macluumaadka si wadajir ah, isla markaana si wada jir ah ugu gudbinnaa dhammaan macluumaadka ku jira Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah 'Macluumaad'. Hoos waxaa ku qoran nooca Macluumaadka aan soo ururin karno:
Macluumaadka Aad Na Siiso. Waxaan ururin karnaa Macluumaadka aad na siiso, sida:
markii aad iska diiwaangeliso ama aad isticmaasho Bogga, ama aad iska qorto adeeg kasta oo ka socda Bogga, waxaan ku weydiin karnaa inaad bixiso macluumaad shakhsi ah oo lagugu aqoonsan karo, sida magaca, cinwaanka boostada, cinwaanka e-maylka, lambarka taleefanka, ama faahfaahinta kale ee xiriirka.
waxaa laga yaabaa inaan kaa codsano inaad na siiso Macluumaadkaaga marka aad gasho tartan ama xatooyo ballaadhan oo aan maalgalino annaga ama aan ka jawaabno sahanno aan soo dhajin karno oo aan weydiisan karno inaan ku dhammaystirno bogga.
markaad nala soo xiriirto si aad noogu soo wargeliso dhibaatada bogga, ama aad sameyso wax kale oo weydiimo guud ah. Waxa laga yaabaa inaan xafidno diiwaanada iyo nuqulada waraaqahaaga (oo ay ku jiraan cinwaanada emaylka, lambarrada taleefannada, iyo wixii macluumaad shakhsi ah ee kale ee aad bixisay).
Waxaan soo aruurin karnaa macluumaad farsamo iyo adeegsi gaar ah markaad isticmaaleyso Boggeena, sida nooca aaladda, biraawsarka, iyo nidaamka aad ku isticmaaleyso, aqoonsi qalab gaar ah, cinwaanka IP-ga, aaladda iyo dejimaha biraawsarka, bogagga aad booqatay, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan sida aad ula macaamilayso Boggeena iyo kuwa la-hawlgalayaashayada dhinac saddexaad ah iyo macluumaadka noo oggolaanaya inaan aqoonsanno oo aan la wadaagno hawshaada dhammaan qalabka iyo Bogga. Waxaa laga yaabaa inaan aqoonsano qalabkaaga si aan kuu siino khibrado shaqsiyeed iyo xayeysiis ku saabsan qalabka aad isticmaasho. Meesha ay ku habboon tahay waxaan ku ururin doonnaa macluumaadkaas keliya oggolaanshahaaga hore. Fadlan eeg xulashooyinkaaga iyo Qeybaha Nidaamka Kukiyada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Waxaad awoodi kartaa inaad marin ka hesho astaamaha Bogga iyada oo loo marayo bulshooyinka xisbiga saddexaad, shirarka, iyo bogagga warbaahinta bulshada, adeegyada, fiilooyinka, iyo codsiyada ('Goobaha Warbaahinta Bulshada'). Dejintaada gaarka ah ee barahaas bulshada sida, iyo sidoo kale siyaasadaha u gaarka ah ee u gaarka ah, ayaa go'aamin doona macluumaadka shaqsiyeed iyo kuwa kale ee ay soo ururin karaan oo ay isticmaali karaan barahaas Bulsheed.
Waxaan marin u leenahay Macluumaadka ku saabsan goobtaada, sida dalkaaga, markaad bixiso ama adoo adeegsanaya macluumaadka aaladda (sida cinwaanka IP-ga), ama meesha qalabkaagu ku yaal markii aad ku gashid Bogga adoo adeegsanaya qalabkaaga mobilada. Meesha ay ku habboon tahay, waxaan ku ururin doonnaa macluumaadkaas keliya oggolaanshahaaga hore.
Maxay salka ku haysaa sharciga ee aan ugu shaqeyno xogtaada shaqsiyeed?
Waxaan kaliya u shaqeynaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeedooyin sharci ah. Adeegsiga macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed sidoo kale waxaa lagu caddeyn doonaa iyadoo lagu saleynayo hal ama in ka badan oo ah 'sababo sharci' oo sharci ah oo lagu bixiyay Xeerka Ilaalinta Xogta Guud ee EU (GDPR).
Jadwalka hoose wuxuu ka kooban yahay sharraxaad ku saabsan baaxadda sababaha sharci ee kala duwan ee laga heli karo GDPR ee Hundeshagen ay ku tiirsan tahay markay ururineyso Macluumaadka:
Waxqabadka qandaraaska: halka aan uga baahanahay xogtaada shakhsi ahaaneed si aan qandaraas kula galno oo aan kuugu siino adeegyadeena.
Danaha sharciga ah: halkaas oo aan u isticmaalno xogtaada shakhsi ahaaneed si aan u gaarno dano sharci ah iyo sababaha aan u adeegsanayno ayaa ka culus cuqdad kasta oo ku saabsan xuquuqdaada ilaalinta xogta.
Sheegashada sharciga: halkaas oo xogtaada shaqsiyeed ay lagama maarmaan u tahay inaan difaacno, dacwad ku soo oogo ama aan dacwad ka sheegno adiga, annaga ama dhinac saddexaad.
Waajibaadkayaga iyo xuquuqdayada: halkaas oo nalooga baahan yahay inaan ku shaqeyno xogtaada shakhsi ahaaneed iyada oo loo marayo waajibaad sharci ah gudaha EU.
Oggolaansho: meesha aad ogolaatay adeegsiga macluumaadkaaga shaqsiyeed (haddii ay sidaas tahay waxaa laguu soo bandhigi doonaa foom oggolaansho ah oo la xiriira adeegsigaas oo kale waadna kala noqon kartaa oggolaanshahaaga wakhti kasta adoo siinaya ogeysiis privacy@ligseruveni.com
Bixinta alaabtayada iyo adeegyadayada:
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka aan kaa aruurinno adiga si aan u fulino codsiyadaada ku saabsan alaabada, dalabka, adeegyada, iyo nuxurka iyo inaan siinno, horumarinno, ilaalinno, shakhsiyeeyo, ilaalinno, oo aan horumarinno khibradaada iyo waxyaabaha aan bixinno. Tusaale ahaan, waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka lagu soo aruuriyay boggeena si (i) u siino waxa ku jira, badeecadaha, adeegyada, iyo cusbooneysiinta (ii) bixinta ogeysiisyada ku saabsan koontadaada ama ka-qayb-galkaaga, (iii) awood kuu siinaya inaad akhrisato oo aad dhejiso faallooyinka, ama (iv) awood inaad gasho dallacsiinta, tartamada, iyo xatooyada.
Meelaha Lagu Shaqeynayo GDPR:
Oofinta waajibaadka qandaraaska iyo sharciga; iyo ogolaanshahaaga (meeshii loo baahdo)
Danaha Sharciga ah (meeshii ku habboon)
Hagaajinta iyo horumarinta alaabada iyo adeegyada cusub; kordhinta waxtarka; ka ilaalinta khayaanada; haysashada faahfaahintaadii hore ee isticmaalka badeecadaha iyo / ama adeegyada laga yaabo inaad iibsatay ama aad xiiseyneysay, si aan kuugu soo jeediyo adiga badeecooyin kale oo aad xiiseyn karto.
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka aan u ururinno (i) si aan kuugu soo dirno macluumaad ku saabsan dallacsiinta, bixinta, iyo astaamaheena, (ii) ku siino xayeysiisyo ku saleysan danahaaga iyo goobtaada, (iii) ku lug lahaanshaha astaamaha is-dhexgalka, howlaha, iyo Goobaha Warbaahinta Bulshada adiga, ama u oggolaato baraha bulshada inay ku siiso xayeysiis ku saleysan danahaaga, (iv) mararka qaarkood waxaan sidoo kale u isticmaalnaa Macluumaadkan inaan ku bixinno, ku suuq geyno, ama ku xayeysiino badeecadaha, barnaamijyada, ama adeegyada aad naga hesho annaga iyo kuwa ku xiran, ganacsiga wada-hawlgalayaasha, iyo kooxaha saddexaad ee la soo xulay, ama (v) annaga iyo kuwa xiriirka la leh, wada-hawlgalayaasha ganacsiga, iyo xulashada dhinacyo saddexaad si ay u bartilmaameedsadaan, u soo bandhigaan, ama u xayeysiiyaan alaabooyinka, barnaamijyada, ama adeegyada laga yaabo inaad danaynayso.
Danaha sharciga ah iyo ogolaanshahaaga (meeshii loo baahdo)
Ku dhiirrigelinta alaabteena iyo adeegyadeena adeegsadeyaashayada, ku siino dalabyo ku habboon, fursado iyo adeegyo laga yaabo inaad danaynayso.
Kula soo xiriirayo
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka adiga kugu saabsan si aan kula soo xiriirno, sida (i) si aan kuu ogeysiinno marka aad ku guuleysato mid ka mid ah tartannadeenna ama xaaqidda ama marka aan isbeddel ku sameyno siyaasadahayaga ama shuruudaha, (ii) si aan uga jawaabno weydiimahaaga, ama (iii) ) si aan kaagala soo xiriiro koontadaada.
Bixinta iyo / ama gudbinta macluumaad muhiim ah; kordhinta waxtarka; maareynta, hagaajinta, ama horumarinta adeegyada iyo wax soo saarka cusub; isu geynta tirakoobka.
Ujeeddooyinka amniga iyo in la falanqeeyo oo si joogto ah loo hagaajiyo Goobaha iyo adeegyadayada.
waa maxay eey dorkie ah
Waxaan u adeegsanaa macluumaadka farsamada iyo adeegsiga si aan u hagaajino naqshadeynta, shaqeynta iyo nuxurka iyo inaan awood u siino inaan lashaqeyno khibradaada waxyaabahayaga iyo waxyaabaha la bixiyo. Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadkan (i) si aan u siino, u horumarino, u dayactirno, shaqsiyadeynno, u ilaalinno, uguna wanaajinno wax soo saarkeena, codsiyadayada, iyo adeegyadeena, iyo in aan ku shaqeyno ganacsigeena, (ii) si aan u sameyno falanqeyn, oo ay ku jiraan falanqeynta iyo ka warbixinta isticmaalka iyo waxqabadka , (iii) in laga difaaco, la aqoonsado, lagana hortago khayaanada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah, (iv) in la abuuro xog isugeyn ah oo ku saabsan kooxaha ama qeybaha isticmaaleyaasheena, iyo (iv) si looga hortago khayaanada.
Fulinta waajibaadka qandaraaska iyo sharciga, danaha sharciga ah, iyo ogolaanshahaaga (meeshii loo baahdo)
Qiimeynta macluumaadka booqashooyinkaaga iyo isdhexgalka aad la sameysid Goobaha si aad si fiican uga fahanto isticmaalkooda si aan u horumarino khibrad adeegsade oo dareen leh.
Suuqgeynta iyo shabakadaha bulshada ee saddexaad.
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadkaaga markaad la falgaleyso astaamaha isku xirka bulshada ee dhinac saddexaad si aan kuugu adeegno xayeysiinta oo aan kula shaqeyno shabakadaha bulshada ee saddexaad. Waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan sida astaamahani u shaqeeyaan, xogta astaanta ah ee aan kaa helno adiga, oo waxaad ogaan kartaa sida loo doorto adoo dib u eegaya ogeysiisyada asturnaanta ee shabakadaha bulshada ee qeybta saddexaad.
Danta sharciga ah, iyo ogolaanshahaaga sida aan ku helnay annaga ama shabakad bulsheed ee saddexaad (meeshii loo baahdo)
Qiimeynta macluumaadka booqashooyinkaaga iyo isdhexgalkaaga Goobaha si aan si fiican uga fahanno isticmaalkooda si aan u horumarin karno khibrad badan oo adeegsade ah, aan ku siino dalabyo ku habboon, fursado iyo adeegyo laga yaabo inaad danaynayso.
U hoggaansanaanta iyo in la beddelo qaab-dhismeedkeenna ganacsi.
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka aan ururinno si aan u ogaano, u baarno, ugana hortagno dhaqdhaqaaqyada ku xad gudbaya shuruucdayada adeegsiga, waxay noqon karaan kuwo khiyaano ah, ku xad gudbaya xuquuqda daabacaadda, ama sharciyada kale, si aan ugu hoggaansano shuruudaha sharciga, iyo inaan ilaalino xuquuqdeena iyo xuquuqda iyo nabadgelyada isticmaaleyaashayada. iyo kuwa kale. Waxaan sidoo kale u siin karnaa xogtaada shakhsi ahaaneed qof kasta oo suurtagal ah inuu soo iibsado ama maalgashado qayb kasta oo ka mid ah ganacsiga Hundeshagen ujeeddooyinka helitaankaas ama maalgashigaas.
Oofinta waajibaadka qandaraaska iyo sharciga
Ilaalinta danaheena ganacsiga, hantida iyo xuquuqaha kale, ilaalinta asturnaanta, amniga iyo xuquuqaha kale ee dadweynaha.
Hundeshagen waxay maamushaa Macluumaadkaaga waxaana loo arkaa inuu yahay maamule xogta sida lagu qeexay GDPR. Waan wadaagi karnaa oo shaaca ka qaadi karnaa isku-darka iyo qeexida Macluumaadka ku saabsan isticmaaleyaasheena xaddid la'aan.
Halka aan ka hawlgalno soosaarayaasha xogta ee ka baaraandegaya xogta shaqsiyadeed ee ka baxsan EEA waxaan hubin doonaa inay jiri doonto heer ilaalin ku habboon. Intaas waxaa sii dheer, waxaan hirgelin doonaa ilaalin sharciyeed oo xukuma kala wareejinta noocaas ah, sida qalab la mid ah noocyada heshiisyada qandaraaska, ogolaanshaha shaqsiyaadka, ama sababaha kale ee sharciga ee ay oggol yihiin shuruudaha sharciga ee khuseeya.
Qaar ka mid ah waddamada ka baxsan EEA waxaa ansixiyay Guddiga Yurub iyaga oo siinaya difaac asaasi ah oo la mid ah sharciyada ilaalinta macluumaadka EEA. Shuruucda ilaalinta xogta EU waxay u oggolaaneysaa Hundeshagen inay si xor ah xogta shakhsiga ugu wareejiso waddamada noocaas ah. Fadlan nagala soo xiriir halkan privacy@ligseruveni.com haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto nuqul ka mid ah ilaalada aan dalbaneyno ee la xiriirta dhoofinta xogtaada shaqsiyeed.
Adeeg Bixiyeyaasha . Waxaan la shaqeynay qeybaha soo socda ee farsameeyayaasha xogta ee ka baaraandegaya xogta shakhsiga ah annaga oo metelayna: qandaraasleyaashayada, bixiyeyaasha adeegga, bixiyeyaasha macluumaadka, iyo dhinacyada kale ee saddexaad ee aan u isticmaalno inaan ku taageerno ganacsigeenna waxaa laga yaabaa inay helaan Macluumaad ka caawiya fulinta howlaha ay qabanayaan. annaga, oo ay ka mid yihiin: abuurista, dayactirka, martigelinta, iyo bixinta Goobahayada, wax soo saarka, iyo adeegyada; sameynta suuqgeynta (tusaale ahaan inay ku siiso xayeysiisyo bartilmaameed ah ogolaansho habboon); maaraynta lacag bixinta, emaylka iyo fulinta dalabka; maamulida tartamada; sameynta cilmi baaris iyo falanqeyn; iyo adeegga macaamiisha.
Suuqgeynta shirkadaha iyo dhinacyada saddexaad. Waxaan u siideyn karnaa Macluumaadka shirkadaha, shuraakada ganacsiga, iyo dhinacyada saddexaad (tusaale, tafaariiqleyda, xayeysiiyayaasha, wakaaladaha xayeysiinta, shabakadaha xayeysiinta iyo barnaamijyada, ururada cilmi baarista, iyo shirkadaha kale) kuwaas oo dhaqankooda uusan daboolin Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo ay u dhaqmi doonaan sidii koontaroole. Dhinacyadan waxaa laga yaabaa inay ku siiyaan, ku deeqaan, horumariyaan, suuq geystaan, iyo haddii kale inay kula soo xiriiraan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Waxaan had iyo jeer ku weydiin doonaa ogolaanshahaaga ka hor inta aan shaaca laga qaadin.
Damaanadqaadayaal iyo wada-dallacsiin . Waxaan mararka qaarkood bixinnaa waxyaabo ama barnaamijyo (tusaale, tartamo, xayeysiisyo, dallacsiinno, ama isdhexgalka baraha Bulshada) oo ay maalgeliyaan ama la wadaagaan qeybaha saddexaad. Xidhiidhyadan awgood, dhinacyada saddexaad waxay kaa ururinayaan ama kaa helayaan Macluumaad markaad kaqaybqaadato hawsha. Ma xakamayn karno adeegsiga dhinacyadan saddexaad ee Macluumaadkan. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad fiiriso siraha gaarka ah ee cid kasta oo seddexaad ah si aad wax uga ogaato ku dhaqanka dhaqankooda xogta kahor intaadan kaqeyb qaadan waxqabadka.
Goobaha Isku Xidhan . Goobaha qaarkood waxay leeyihiin xiriirro degello kale, oo ay ku jiraan Goobaha Warbaahinta Bulshadu ku xiriirto. Waxaan ku soo dari karnaa barnaamajyada barnaamijka warbaahinta bulshada ama fiilooyinka ('Plug-ins') ee shabakadaha bulshada, oo ay ku jiraan Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest iyo kuwa kaleba. Plug-ins ayaa macluumaadkaaga adiga kugu saabsan u gudbin kara barnaamijka 'Plug-in' ee u gaarka ah iyadoon talaabo lagaa qaadin. Macluumaadkan waxaa ka mid noqon kara lambarkaaga aqoonsiga isticmaalaha barta internetka, websaydhka aad ku jirto, iyo in ka badan. La falgalinta Plug-in waxay si toos ah ugu gudbin doontaa macluumaadka shabakadda bulshada ee Plug-in macluumaadkaasna dadka kale ayaa ka arki kara bartaas. Plug-ins waxaa xukuma siyaasadaha gaarka ah ee madal u gaarka ah, mana ahan siyaasadeena.
Ujeeddooyinka Sharci-fulinta iyo Sharciga . Waxaan siideyn karnaa macluumaadka si aan uga jawaabno nidaamka sharciga, tusaale ahaan annaga oo ka jawaabeyna amarka maxkamadda ama yeeriska, ama ka jawaabista dalabka hay'adda sharci fulinta. Waxaan sidoo kale u sifeyn karnaa Macluumaadka noocaas ah dhinacyada saddexaad: (i) ujeeddooyinka ilaalinta khayaanada iyo yareynta khatarta amaahda, (ii) halka aan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay in la baaro, laga hortago, ama la qaado tallaabo la xiriirta howlaha sharci darrada ah, (iii) si loo dhaqan geliyo xuquuqdeena ka dhalaneysa wixii qandaraasyo ah ee nala galay adiga iyo annaga, oo ay ku jiraan Shuruudaha Adeegsiga, Nidaamkan, iyo biilasha iyo ururinta, (iv) haddii aan aaminsanahay in shaacintu ay lagama maarmaan tahay ama ku habboon tahay ilaalinta xuquuqdeena, hantideena, ama nabadgelyadeena ama taas macaamiisheenna, isticmaaleyaasheena, qandaraasleyaasha ama kuwa kale, (v) sida sharcigu qabo.
Isgaarsiinta Suuqgeynta iyo La Wadaagga Qeybaha Saddexaad. Haddii aad iska diiwaangelisay inaad hesho joornaalada iyo / ama macluumaadka suuqgeynta, waxaad fursad u leedahay inaad doorato dookhaaga marka loo eego helitaanka isgaarsiinta suuqgeynta annaga, iyo wadaagista macluumaadka aan la wadaagno wada-hawlgalayaasha ujeeddooyinkooda suuq-geynta tooska ah.
Waad cusbooneysiin kartaa dookhyadaada adiga oo ixtiraamaya inaad naga hesho isgaarsiinta suuq-geynta qaarkood annaga, iyo wadaagista macluumaadka shaqsiyeed ee aan la leenahay dhinacyada saddexaad. Waxaad ku samayn kartaa adoo nagala soo xiriiraya barta privacy@ligseruveni.com . Waxa kale oo aad ka bixi kartaa helitaanka isgaarsiinta suuqgeynta iimaylka, adoo raacaya tilmaamaha 'ka-noqoshada' ee lagu bixiyo emayl kasta oo aad naga hesho. Waxa kale oo aad ku hagaajin kartaa ogeysiisyada riixitaankaaga aaladda moobaylka adoo adeegsanaya qalabkaaga ama dejimaha barnaamijka.
Xulashada Xayeysiiska . Waxaa laga yaabaa inaan la shaqeyno dhinacyada saddexaad si aan u soo bandhigno xayeysiinta, oo aan uga qeyb galno xog aruurinta, ka warbixinta, falanqaynta goobta, bixinta xayeysiinta iyo cabirka jawaabta ee ku saabsan Goobahayada iyo websaydhada qeybta saddexaad iyo codsiyada waqtiga. Dhinacyadan saddexaad waxay adeegsan karaan cookies, beakons webka, pixels, iyo tikniyoolajiyad kale oo la mid ah si ay u qabtaan hawshan. Waxa kale oo laga yaabaa inay ka helaan macluumaad ku saabsan degellada aad booqato, codsiyada aad isticmaasho, iyo macluumaadka kale ee ka socda daalacashadaada iyo aaladahaaga si ay u soo bandhigaan xayeysiis loo qaabeyn karo danahaaga boggayaga iyo bogagga kale. Xayeysiinta noocan ah waxaa loo yaqaanaa xayeysiinta dulsaarka ku saleysan, waxaana loo isticmaali karaa in lagu mideeyo daalacashada iyo aaladaha kala duwan ujeeddada xayeysiinta iyo falanqaynta xiisaha ku saleysan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan xayeysiinta dulsaarka ku saleysan ee kumbuyuutarkaaga ama biraawsarkaaga moobiilka, iyo awoodda aad uga bixi karto xayeysiinta noocan ah ee dhinacyada saddexaad, fadlan booqo Xulashadaada internetka iyo / ama EDAA Hindisaha Is-xakamaynta ee Xayeysiinta Habdhaqanka Internetka . Fadlan ogow in xulasho kasta oo aad ka baxdo oo aad ku jimicsato barnaamijyadan ay khuseyso oo keliya xayeysiinta ku saleysan xiisaha ee dhinacyada saddexaad ee aad doorato. Waxa kale oo laga yaabaa inaad sii wado helitaanka xayeysiinta, laakiin xayeysiintaasi waxay noqon kartaa mid aan khusayn danahaaga.
Waxaad heli kartaa fursado badan oo kuxiran nidaamkaaga qalliinka ama qalabka mobilada. Inta badan nidaamyada ka hawlgala qalabka waxay bixiyaan tilmaamo iyaga u gaar ah oo ku saabsan sida loo yareeyo ama loo joojiyo gaarsiinta xayeysiinta ku habboon barnaamijka. Waad dib u eegi kartaa dejimaha gaarka ah ee nidaamka qalliinka noocaas ah si aad wax uga baratid xaddidaadda xayeysiinta ku habboon ee barnaamijka. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ka joojiso macluumaadka goobta saxda ah aaladda moobaylka adoo adeegsanaya qalabkaaga mobilada oo aad dooran karto inaad xaddiddo ururintaas.
SIYAASADA COOKIE EE UU ISTICMAALAYA EU
Kukiyada iyo Teknolojiyada kale . Annaga, iyo kuwa ku xiran, bixiyeyaasha adeegga saddexaad, iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga ayaa 'cookies' u diri kara kombuyuutarkaaga ama adeegsan karnaa teknoolojiyad la mid ah si kor loogu qaado khibraddaada internetka ee Goobahayada iyo iyada oo loo marayo xayeysiiska iyo warbaahinta ku baahsan internetka iyo barnaamijyada moobiilka.
Kukiyada ayaa ah feylal qoraal yar oo ay ku jiraan macluumaad lagu soo dejinayo qalabkaaga markii aad booqato degel, oo ay ku jiraan Goobahayagu. Kukiyada ayaa markaa dib loogu celiyaa bogga asalka ah ee booqashooyinkaaga dambe ee boggaas. Inta badan bogagga shabakadda waxay ka kooban yihiin waxyaabo ka yimid dhowr degel websaydh sidaa darteed markii aad booqato degel internet, biraawsarkaagu wuxuu ka heli karaa buskudyo dhowr ilo ah. Kukiyada ayaa faa'iido leh maxaa yeelay waxay u oggolaadaan degel inuu aqoonsado aaladda isticmaaleha. Kukiyada waxay kuu oggolaaneysaa inaad si hufan ugu dhex wareegto boggaga internetka, xusuusnow dookhyada iyo guud ahaan hagaajinta khibrada isticmaalaha. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu xayeysiiyo xayeysiinta danahaaga adoo adeegsanaya raadinta shabakaddaada. Kukiyada fadhiga ayaa si otomaatig ah loo tirtiraa markaad xirto biraawsarkaaga iyo cookies-ka joogtada ah ayaa ku sii jiraya qalabkaaga ka dib marka biraawsarku xirmo (tusaale ahaan xusuusashada isticmaaleyaasha aad doorbido markii aad ku soo noqotid Goobaha).
Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa pixels ama 'beacons web' oo kormeeraya isticmaalka Goobahayada. Tilmaamayaasha shabakadaha waa faylalka elektaroonigga ah ee yar-yar ee lagu dhex daray Goobaha ama wada-xiriirkeenna (tusaale ahaan emayllada) oo noo oggolaanaya, tusaale ahaan, inaan tirino isticmaaleyaasha booqday bogaggaas ama furay email ama tirakoobyada kale ee la xiriira. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa 'Qalabka horumarinta Barnaamijka' ('SDKs') barnaamijyadeenna si aan u qabanno hawlo isku mid ah sida 'cookies' iyo shabakadaha internetka. Tusaale ahaan, SDKs waxay soo aruurin karaan macluumaadka farsamada iyo adeegsiga sida aqoonsiyeyaasha qalabka mobilada iyo isdhexgalkaaga Bogga iyo barnaamijyada kale ee mobilada.
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa cookies-ka iyo teknoolojiyada kale (i) si aan u siino, u horumarino, u dayactirno, shaqsiyeynno, u ilaalinno, una wanaajinno Goobaheena, wax soo saarkeena, barnaamijyadeenna, iyo adeegyadeena iyo in aan ku shaqeyno ganacsigeenna, (ii) si aan u sameyno falanqeyn, oo ay ku jiraan falanqaynta iyo ka warbixinno adeegsiga iyo waxqabadka Goobahayada iyo agabyada suuqgeynta, (iii) si looga hortago, loo aqoonsado, loogana hortago khayaanada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah, (iv) si loo abuuro xog isugeyn ah oo ku saabsan kooxaha ama qeybaha isticmaaleyaashayada, (v) si loo waafajiyo adeegsadayaasha dhammaan qalabka, shirkadaha, wada-hawlgalayaasha ganacsiga, iyo xulashada dhinacyada saddexaad, iyo (vi) annaga iyo kuwa ku xiran, wada-hawlgalayaasha ganacsiga, iyo xulashada dhinacyada saddexaad si loo bartilmaameedsado, loo bixiyo, ama loo suuq geeyo, wax soo saarka, barnaamijyada, ama adeegyada. Kukiyada iyo tikniyoolajiyadaha kale waxay sidoo kale fududeeyaan oo cabbiraan waxqabadka xayeysiinta lagu soo bandhigay ama la keenay annaga ama annaga iyo / ama shabakadaha kale ama bogagga.
Hadda kama jawaabno calaamadaha Ha Raadsan maxaa yeelay weli heer farsamo oo isku mid ah weli lama soo saarin. Waxaan sii wadeynaa inaan dib u eegis ku sameyno teknolojiyadda cusub waxaana suuragal ah inaan qaadanno halbeeg marka mid la abuuro.
Maareynta Kukiyada iyo Teknolojiyadaha kale.
Kuwaas buskudka waa lagama maarmaan si ay kuu suurta geliso inaad ku dhex wareegto Goobaha oo aad adeegsato astaamaheeda. Iyadoo aan lahayn buskudyadan, adeegyadii aad codsatay (sida marin u dhexaynta bogagga) lama bixin karo. Jadwalka soo socda ayaa muujinaya tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
somali bulldog feer feedhyaamo qas mix puppy for sale
Waxaan u adeegsanaa cookies-ka falanqaynta si aan u falanqeyno sida booqdeyaashayadu u adeegsadaan Goobaha iyo inaan ula soconno waxqabadkooda. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan siino khibrad tayo sare leh adoo u habeynayna waxyaabaha aan bixinno isla markaana si deg deg ah u aqoonsanno una xallinno wixii arrimo ah ee soo kordha. Tusaale ahaan, waxaan u adeegsan karnaa cookies-ka waxqabadka si aan ula socono bogagga ugu caansan, habka isku xirka bogagga ayaa ugu waxtar badan, iyo in la go'aamiyo sababta bogagga qaarkood ay u helaan farriimaha qaladka ah. Waxaan sidoo kale u adeegsan karnaa kukisyadan si aan u iftiiminno maqaallada ama adeegyada Goobaha aan u maleyno inay adiga kugu daneyn doonaan adiga oo ku saleynaya isticmaalkaaga Goobaha. Macluumaadka ay soo ururiyeen kukisyadan kuma xirna macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed annaga ama qandaraasleyaasheena waxaana loo isticmaalaa oo keliya wadar ahaan iyo foomka la aqoonsaday. Jadwalka soo socda ayaa muujinaya tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
Halkan guji siyaasadaha asturnaanta Google ee ixtiraamka Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Waad ka bixi kartaa raadinta Google Analytics adoo booqanaya: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kuu siino shaqooyin gaar ah. Tusaale ahaan, fiirinta waxyaabaha fiidiyowga, durdurrada tooska ah, ama xusuusinta xulashooyinka aad sameyso iyo inaad siiso sifooyin shaqsiyeed kor loo qaaday iyo inbadan. Kukiyadaas looma adeegsan karo raadinta bogaggaaga. Jadwalka soo socda ayaa muujinaya tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
Kukiyada xayeysiinta (ama bartilmaameedka cookies) waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan caadooyinka daalacashada ee la xiriira qalabkaaga waxaana loo isticmaalaa inay ka dhigaan xayeysiinta mid adiga iyo danahaaga khuseysa. Kukiyadaani waxay sidoo kale cabiraan waxtarka ololayaasha xayeysiinta waxayna raadinayaan in xayeysiisyada si fiican loo soo bandhigay. Waxaad ka heli kartaa Maamulaha Ogolaanshaha Midowga Yurub salka hoose ee Goobaha haddii aad rabto inaad wax ka bedesho dookhaaga ogolaanshaha. Liistada soo socota waxay dejineysaa tusaalooyin ka mid ah noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' ah:
Source cookie: DoubleClick:
Halkan guji si aad uhesho siyaasada asturnaanta Google ee laxiriirta DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo, waad ku sameyn kartaa sidaas https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Kukiyada Xayeysiinta ee Goobaha Iskuxira
Kukiyada Xayeysiinta waxaa isticmaali kara baraha bulshada ee kuxiran boggayaga, sida badhanka 'Share' ama maqalka / fiidiyowga cayaartoyda lagu daro, marka lagu daro bixinta shaqooyinka la codsaday. Baraha bulshada ayaa ku bixiya adeegyadan si ay u aqoonsadaan inaad adiga (ama aad si sax ah u haysatid aaladdaadu) inaad booqatay degellada qaarkood. Bogagga warbaahinta bulshada ee noocan oo kale ah waxay dhigayaan cookies-ka xayeysiinta ah labadaba markaad booqanayso Goobahayaga iyo marka aad adeegsanayso adeegyadooda oo aad ka fogaanayso Goobahayada. Dhaqanka buskudka qaar ka mid ah baraha bulshada waxaa lagu qeexay hoos:
Siyaasadda cookie ee Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Siyaasadda cookie ee Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Siyaasadda cookie ee Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Siyaasadda cookie ee Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/cookies
Siyaasadda cookie ee YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
Siyaasadda cookie ee SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/cookies
Siyaasadda Kukiyada ee Google Plus: https://policies.google.com/technologies/cookies
XUQUUQDAADA IN AAD HESHO, SAXDO OO KADHASHO MACLUUMAADKAAGA
Waxaad xaq u leedahay inaad na weydiiso nuqul ka mid ah Macluumaadkaaga, inaad saxdo, tirtirto ama aad xaddido qaabsocodkiisa, iyo inaad hesho Macluumaadka aad dhiibtay. Waxaad sidoo kale na weydiin kartaa inaan u gudbino Macluumaad gaar ah oo aad siisay dhinac saddexaad si elektiroonig ah.
Waxaad xaq u leedahay inaad diido ka shaqeynta macluumaadka shaqsiyeed iyadoo lagu saleynayo danahayaga sharciga ah. Meeshii aan kaa codsanay oggolaanshahaaga si loo socodsiiyo Macluumaadka, waxaad xaq u leedahay inaad ka laabato ogolaanshahan wakhti kasta.
Haddii aad leedahay walaac aan la xallin, waxaad xaq u leedahay inaad u dacwooto hay'adda ilaalinta xogta EU-da halka aad ku nooshahay, ka shaqeyso ama meesha aad rumeysan tahay inuu xadgudub ka dhacay. Fadlan la soco in waxyaabo ka reeban ay khuseeyaan ku dhaqanka xuquuqahan sidaa darteedna aadan awood u yeelan karin inaad ku dhaqmaan dhammaan xuquuqdan dhammaan xaaladaha.
Xuquuqdaasi waxay ku xiran tahay ka-dhaafitaanno gaar ah si loo ilaaliyo danta guud (sida ka-hortagga ama ogaanshaha dembiga) iyo danaheenna (tusaale ahaan ilaalinta mudnaanta sharciga ah). Mararka qaar, tani waxay macnaheedu noqon kartaa inaan awoodno inaan xafidno Macluumaadkaaga xitaa haddii aad ka noqoto oggolaanshahaaga. Waxaan kaga jawaabi doonnaa codsiyada badankood hal bil gudaheed.
Waad ka saamixi kartaa joornaal kasta ama emayllo xayeysiis kala duwan ah wakhti kasta adoo gujinaya xiriiriyeyaasha 'ka-noqoshada' ee lagu bixiyo isgaarsiinta noocaas ah. Kama bixi kartid isgaarsiinta la xiriirta bogga, sida xaqiijinta koontada, xaqiijinta iibsashada iyo farriimaha maamulka, illaa inta aad ka diiwaangashan tahay Goobaha.
Waqtiyadayada haynta xogta shakhsiyeed waxay ku saleysan yihiin baahiyaha ganacsiga iyo shuruudaha sharciga. Waxaan haynaa xogta shakhsiga ah illaa iyo inta ay lagama maarmaanka u tahay ujeeddada ka shaqeynta ee ujeeddooyinkeeda loo soo ururiyey xogta shakhsiga ah, iyo wixii kale ee la oggol yahay, ee la xiriira. Tusaale ahaan, waxaan haynaa faahfaahinta macaamil ganacsi ee qaarkood iyo waraaqaha la isweydaarsanayo illaa inta uu ka dhammaanayo waqtiga sheegashooyinka ka soo baxa macaamilku, ama aan u hoggaansameyno shuruudaha sharciyeed ee la xiriira haynta xogtaas.
Waxaan hirgelinay tallaabooyin farsamo iyo abaabul oo habboon si loo hubiyo ka shaqeynta xogta shakhsiga ah. Ilaalintaani way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran xasaasiyadda, qaabka, goobta, qadarka, qeybinta iyo keydinta xogta shakhsiga ah, waxaana ku jira tallaabooyin loogu talagalay in lagu ilaaliyo xogta shakhsiga ah ee laga ilaaliyo marin aan la oggolaan.
Waxaan xaddideynaa helitaanka macluumaadka shakhsi ahaaneed ee shaqaalaha iyo dhinacyada saddexaad ee u baahan helitaanka macluumaadkaas si sharci ah, ujeeddooyin ganacsi oo khuseeya.
Dhamaan xubnaheena shaqaalaheena, qandaraasleyaasha iyo dhinacyada sadexaad ee marin uheli doona xogta shaqsiyadeed ee tilmaamaheena waxay ku xirnaan doonaan qarsoodiga waxaanan u adeegsanaa kontaroolada marin u helida si aan u xadidno galaangalka shakhsiyaadka u baahan helitaanka noocan ah ee ku aaddan fulinta waajibaadkooda iyo shaqooyinkooda.
Waxaan haynaa siyaasado nabadgelyo oo macluumaad ah oo jira iyo siyaasaddeeda amniga iyo nidaamyadeeda si joogto ah loo hubiyo. Waxaan u qaadaneynaa amniga kaabayaasheena IT-ga si aad u culus.
In kasta oo aan qaadno taxaddar macquul ah si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed, ma ballan qaadi karno amniga macluumaadkaaga shakhsiyeed. Fidinta macluumaadka shakhsiga ah ee loo maro internetka iyo aaladaha moobiilku si buuxda uma sugna, sidaas awgeedna, gudbinta macluumaadka shakhsiga ah wuxuu halis kuugu jiraa. Annaga mas'uul kama nihin in la hareer maro wax kasta oo asturnaanta ama tallaabooyinka amniga ee aan bixino.
Badbaadada iyo amniga macluumaadkaaga sidoo kale adiga ayey kugu xiran tahay. Meeshii aan kaa siinay (ama meeshii aad dooratay) eray sir ah oo aad ku geli karto qaybo ka mid ah Goobahayaga, adiga ayaa mas'uul ka ah inaad sirtaasi sir ka dhigato. Waa inaadan la wadaagin lambarkaaga sirta ah cidna.
Waxaan cusbooneysiin karnaa Siyaasadeena waqti ka waqti. Waxaan kugula socodsiin doonaa wixii ku saabsan wixii isbeddel ah ee ku yimaada Nidaamkan Asturnaanta adoo ogeysiis ku dhejinaya Goobaheena. Waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad xilli-xilli dib u hubiso oo aad dib-u-eegto Siyaasaddan si aad uga warqabto wixii isbeddello ah ee dhowaanahan dhaca.
Waxyaabaha Asturnaanta . Haddii aad wax walaac ah ama cabasho ah ka qabtid arrimaha gaarka ah ee Goobaha, fadlan nagala soo xiriir Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thDabaqa, Bariga Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. ama email noogu soo dir cinwaanka privacy@ligseruveni.com. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan kuugu soo jawaabi karno waqti ku habboon oo xirfad leh si aan uga jawaabno su'aalahaaga oo aan u xallinno welwelkaaga.
Und Hundeshagen Digital Media, LLC. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. Hundeshagen iyo ligseruveni.com waa summad ka diiwaan gashan Hundeshagen Digital Media, LLC
shar pei iyo pitbull mix
buluug sanka buluugga ah
Intee ayey le'eg yihiin silsiladaha dibigu
ey feist buur iib ah